Axmed Madoobe oo dagaal ku baaqay | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Axmed Madoobe oo dagaal ku baaqay
Madaxweynaha Dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo ku sugan Magaalada Dhoobleey ee Gobolka Jubbada Hoose ayaa waxaa uu halkaasi ka bilaabey kulamo looga hadlayo howlgallada ka dhanka ah Ururka Al-Shabaab.
Axmed Madoobe ayaa kulan waxaa uu la qaatey Saraakiisha sar sare e Ciidanka Jubbaland kuwaas oo ku sugan Magaalada Dhoobleey,isaga oo kala hadlayay howlgalka socda ee lagula daaalamayo Al-Shabaab iyo guulaha Ciidanka Dowladda & kuwa Jubbaland ka gaareen.
Madaxweyne Axmed Madoobe ayaa faray Saraakiisha Ciidanka Jubbaland inay dar dar geliyaan howlgalka ka dhanka ah Al-Shabaab,isla markaana sanadkaan gudihiisa laga doonayo inay ka saaraan Al-Shabaab deegaannada ay kaga sugan yihiin Gobolada Jubbooyinka.
Maalma ka hor ayaa Madaxweynaha Jubbaland waxaa uu booqday Ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaliya ee DANAB & kuwa Jubbaland oo howlgal ka wada duleedka degmada Jamaame,isaga oo ugu baaqay inay xoojiyaan dagaalka ay kula jiraan Al-Shabaab.
Ciidamada Dowlad Goboleedka Jubbaland & kuwa Dowladda Soomaaliya ayaa todobaadyadii la soo dhaafay waxaa ay wadeen howlgallo kala duwan oo ay ku doonayaan inay Al-Shabaab kaga saaraan deegaannada Gobolada Jubbaland oo ay ugu weyn tahay Caasimadda Maamulka Jubbaland ee Magaalada Bu’aale.